Sida loo geliyaan Custom Videos canabka n
Canabka ayaa qaaday adduunka online iyo smartphone duufaanka, iyo dad badan oo dheeraad ah oo ku rakibidda app in ay qalabka ay mobile iyo saxiixo sidii xubin ka mid ah. VINE waa la wadaago madal video mobile in uu noqday hab weyn oo madadaalada ah ee dad badan oo maanta. Haddii aad tahay isticmaale cusub canabka oo doonaya in ay geliyaan oo xiiso leh ama funny videos in u ciyaara 6-ilbiriqsi, aad rabto in laga yaabo in uu ogaado sida oo kale dadka isticmaala canabka videos geliyaan si ay u app in ay horeba u astaysto. Haddii aadan haysan aqoon ku saabsan canabka, sida uu yimaado mid aad u adag, laakiin dabcan, waxaa had iyo jeer waa hab fudud loo sameeyo. Haddii aad rabto in aad barato sidii aad u, sii akhriska hoose laba hab uploading videos caadadiisu canabkiinna oo tus adduunka.
Habka 1: Isticmaalka iExplorer
Habka 2: Isticmaalka canabka Uploader App
iExplorer waa software computer in laguu ogolaado in aad si ay u gudbiyaan files ka qalab kasta oo sida iPhone, iPod, iPad, ama Mac iyo xitaa PC ah. Waxaad ku samayn kartaa adigoo si fudud u soo jiiday iyo tagtey files si ay Lugood. Si aad u baratid wax dheeraad ah sida loo isticmaalo samaynta Cinabyo caadadii, akhriyaan oo fahmaan tallaabada edbinta ay tallaabo hoos ku qoran.
Maxaa la diyaariyo ka hor inta nidaamka:
6-labaad mp4 file video waxa aad rabto in aad u geliyaan in ay canabkiinna (Dhab saxar video)
Tallaabo 1: Ku rakib iExplorer in aad Mac ama PC
Tag iExplorer page oo riix badhanka download soo bixi version demo lacag la'aan ah, laakiin haddii aad rabto in aad si weyn uga faaiidaysato ee software-ka, waxaad ka iibsan kartaa nooca buuxda u jaban sida $34.99.
Marka dajinta lagu sameeyo, gashato in computer by double gujinaya file exe, (waayo, PC) iyo daynin ku rakibi ay aqbalaan heshiiska oo riixaya badhanka soo socda.
Fiiro gaar ah: Si aad si guul leh ku rakibi iExplorer, waxaad u baahan doontaa isagoo QuickTime in aad PC.
Talaabada 2: Isku aad Device macruufka si aad u computer Isticmaalka Cord USB
Marka la rakibo waxaa loo sameeyaa, Korka xadhiggaaga USB ama isku xira si aad u isticmaasho in ay ku xidhmaan aad macruufka telefoonka ama qalabka kale ee macruufka aad rabto in aad isticmaasho si aad u computer meesha iExplorer la rakibo. Ugu isku daygii ugu horreeyay, waxay in ka badan dhowr daqiiqo qaadan karta in qalab aad in la ogaado, laakiin ka dib markii isku daygii hore, marka ku xigta aad ku xidhi doonaa qalab aad mar kale iExplorer, waxa ay noqon doontaa si dhaqso ah. Marka xira ah qalab aad waxa uu noqday guul, iExplorer si toos ah lagu daahfuri doonaa, haddii kale, gacanta ay aad u abuurtaan karo.
Talaabada 3: fur Folder Xagee Video badbaadi doona iyo Video aad rabto in aad geliyaan Saar
Dul suuqa kala software ah oo ka raadso si 'tmp' galka ag maraya in ay File> Apps> canabka> tmp, halkaas weeye meesha video aad ka diiwaan gelin doonaa oo diiwaan badbaadi doonaa. Waxa kale oo ay si toos ah u abuuraa sawir thumbnail aad video for.
Fur folder iyo meesha video taasi oo marhoreba saxar gudaha gal, waxaad u samayn kartaa adigoo soo jiiday iyo tagtey video in si folder tmp ah.
Talaabada 4: Burcad app canabka ah, iyo u qoraan clip ah
Burcad app canabka ka Device iyo Qor video clip wax kasta oo aad rabto in aad by haysta suulka shaashadda aad qalab macruufka ah, in la hubiyo in aadan u qoraan ka baxsan xadka; waxaad ku qori karta video ilaa taxan ee cagaaran muujinaysaa ilaa.
Waxaad ku qori karta video ah wax, waxba ma ahan sida video aad qori bedeli doona video aad hore u saxar ah oo doonaya in ay geliyaan si ay u account canabkaaga.
Talaabada 5: nafta ka 'tmp' Folder Markiiba iyo Magaca faylasha
Marka aad la sameeyo la qoro video ah geedcanabka, dib u soo baxay folder tmp tagaan, waxa ay dhaqaalo ka helo, ka dibna dib ugu gudaha mar kale, waxaad arki doontaa in rikoorka ku meel gaar ah horey u yahay in uu jiro. Waxa soo socda aad u leedahay in la sameeyo waa in magaca diiwaanka ku meel gaar ah, tusaale ahaan, waxaad ku dari kartaa 'X' dhamaadka waxaa ka mid ah si ay u kala duwan. Ka dib markii in, ka dooro video aad saxar ah oo doonaya in ay geliyaan koontadaada canabka. Sida canabka maaraysa video ee aad imika uun la duubay telefoonka, video caadadii bedeli doona app.
Talaabada 6: Dib u tag App canabka iyo Dhamee duubay
Tag qadada canabka ah mar iyo ka dhigi doonaa in aad dib u bilaabi video aad duubay, ka jaftaa ku taxan dhinaca midig ee shaashada iyo video aad saxar muuqan doonaa shaashadda aad iPhone. Tubada badhanka soo socota ka dibna ku dar caption si aad video, oo wuxuu u sameeyey!
Haddii aad rabto in aad geliyaan caadadii canabka videos aan la isticmaalayo your computer, dooq kale oo waa ay ku rakibidda app ah in qalab aad. In kastoo aad si fudud oo hufan si ay u isticmaalaan labada hab, habkan waa dhakhso ah oo sahlan ka badan kii hore. Waxaad isticmaali kartaa app canabka Uploader in aad ka iibsan kartaa rakibi qalabka macruufka aad lacag la'aan ama ku iibsanayo app ad-free. Si aad u ogaato sida loo geliyaan caadadii video koontadaada canabka isticmaalaya app this, akhri tallaabada by habka tallaabo hoos ku qoran.
Talaabada 1: gashato
Tag App Store iyo baadhaan "canabka Uploader" rakibi mid ugu horeysay oo ay ku tusi doonaa ilaa bogga natiijada.
Talaabada 2: Calaamad In Your Account canabka
Ma aha in aad si saxiixdo ama aad xisaab u gaar ah ee app si aad u isticmaasho, isticmaasho login canabka inay la soo wareegto in, waxa kale oo aad si fudud u xiri kartaa Twitter ama email calaamad fudud ee geedi socodka.
Talaabada 3: Dooro Video Custom aad rabto in aad geliyaan
Xitaa ka hor inta la isticmaalayo app, waxaa wanaagsan haddii aad horey u video caado aad rabto in aad geliyaan badbaadiyey in aad ku giringiriya Camera, ka dib markii in ka, waxaad noqon doontaa dhakhso leh liiska videos badbaadiyey in aad ku giringiriya Camera, aad mid ka mid ah tubbada doonayaan inay geliyaan.
Talaabada 4: Qaybta aad rabto in aad geliyaan Dooro
Waxaad in la xasuusto in canabka oo keliya kuu ogolaanayaa inaad geliyaan videos 6-labaad ku loop. Dooro taas oo qayb ka aad rabto in aad geliyaan, tani waa lagama maarmaan haddii aad video waa ka sii dheer tahay 6 ilbiriqsi.
Talaabada 5: Dalag / Qaybta aad rabto in aad ka muuqdaan canabka Edit
Sida Instagram, Vine ma ogola in aad geliyaan muuqaalka ama sawirka faylka, aad leedahay si aad noola video ee square, si dooran taas oo qayb ka mid ah shaashadda waa waxa ugu muhiimsan oo ay jiidayeen square ee ku yaal. Marka abuurka oo la sameeyo, waxa kale oo aad codsan kartaa saamaynta ama shaandhayso on video ah.
Talaabada 6: geliyaan Video ah
JWhen aad samaysay sixiddiisa video clip ah, aad haatan ku dari kartaa caption kasta oo aad rabto oo hashtags la xiriira post canabka ah, ka dibna button Upload ka jaftaa. Sug koombiyuutarka si uu u dhameystiro, taasi waa inay qaataan oo kaliya dhowr ilbiriqsi.
Tallaabo 7: Hubi oo canabkiinna
Dib u tag guriga oo aan bilowno account canabkiinna, hubi geedka canabka ah ee aad imika uun uploaded.
> Resource > Video > Sida loo geliyaan Custom Videos canabka